Twilert: Alerts Email efu na Twitter | Martech Zone
Anyị na-elekwasị anya na ntakịrị Twitter izu a, yabụ lee ngwa ọrụ ọzọ dị mfe nwere ike inyere gị aka iji Twitter maka inweta azụmaahịa ọhụụ.
Twilert ezigala ihe ruru nde 40 maka ndị ọrụ ya. Ọ bụ ngwa weebụ nke na-enyere gị aka ịnweta mmelite email mgbe niile nke tweets nwere aha gị, akara gị, ngwaahịa gị, ọrụ gị… ma ọ bụ isiokwu ọ bụla ọzọ dị mkpa ị chere ga-enyere gị aka iduga ụlọ ọrụ gị na azụmaahịa ọhụrụ na Twitter.
Aga m akwado itinye n'ọrụ nyocha dị elu - enwere nnukwu nhọrọ na asụsụ, ọnọdụ obodo yana ọbụnadị omume - dịka ọ bụrụ na enwere “?” na tweet. Nke a zuru oke maka ịchọta ndị enyemaka chọrọ enyemaka na ịza ha ozugbo!
Tags: jụọ ajụjụ twitterUgboro abụọnnweta twitterihe ngosi twitter
Mepụta Mgbasa Twitter Dị Mfe na IFTTT
2nd 2 Ọ dịghị onye
Apr 4, 2013 na 11: 02 AM
Daalụ Doug. nke a bụ nnukwu ozi ọma. You nwere ike ịnweta ọtụtụ akụkọ na-aga otu email ahụ?
Ebe ngosi ihe mgbe ochie na FIT
Jun 19, 2013 na 11:39 AM
TWILERT dị nwute nke enweghịzị n'efu